Meziwanye ọdịdị nke ngwa GTK + 3 na QT na OpenBox | Site na Linux
Meziwanye ọdịdị nke ngwa GTK + 3 na QT na OpenBox
Meghee enwere ike gbanwee na gburugburu na engines GTK nke mere na windo na ngwa na-adị mma n’anya ma dịkwa mma na desktọọpụ anyị. O di nwute, mgbanwe ndị a adịghị etinye maka GTK + 3 dị ka ngwa ọhụrụ dị na GNOME 3 ma ọ bụghị maka ngwa etolitere na QT.
N'ihi na ndị a ngwa nwere ihe oyiyi dị ka anyị OpenBox dabeere na desktọọpụ, ọ dị mkpa ịrụ a di na nwunye nke mmezi ntuziaka ntọala.
1 Maka ngwa GTK + 3
2 Maka ngwa QT
Maka ngwa GTK + 3
Maka ngwa GTK + 3 iji isiokwu dị ụtọ karị ma ọ bụ karịa yiri nke ndị ọzọ GTK ngwa na sistemụ anyị, ọ dị mkpa iji wụnye librsvg na gnome-themes-standard packages.
Mara: Cheta na akwụkwọ ntuziaka a bụ maka OpenBox na Arch Linux mana ị nwere ike imeghari ya na nkesa ndị ọzọ.
sudo pacman -S librsvg gnome-themes-ọkọlọtọ
Na-esote, mepụta faịlụ nhazi ebe ị kọwapụtara isiokwu nke ngwa GTK + 3 ga-eji.
Tapawa ahịrị ndị a, na-agbanwe okwu THEME na aha GTK + 3 isiokwu ịchọrọ iji.
[Ntọala] gtk-ngwa-ahọrọ-ọchịchịrị-isiokwu = ụgha
gtk-theme-name = Isiokwu
E nwere isiokwu ole na ole na-enye ọdịdị yiri nke GTK + 3 na GTK + 2, n'etiti ha bụ ndị a:
Adwaita maka GTK + 3 na Aldabra maka GTK + 2
Newlooks maka GKT + 3 na Clearlooks maka GTK + 2
Mara mma Brit
Mara: Cheta na ịtọlite ​​isiokwu GTK + 2 nke OpenBox ga-eji, ị nwere ike iji ngwa LXAppearance.
Maka ngwa QT
Maka ngwa QT anyị nwere ike iji ngwa QTConfig gụnyere na nchịkọta QT 4.5 nke arụnyere mgbe anyị wụnye ngwa dabere na QT.
Iji malite, na-agba qtconfig site na ọnụ ya.
N'otu oge na windo QT nhazi, họrọ taabụ Ọdịdị. N'ebe ahụ, ị ​​ga-enwe ike ịhọrọ nhọrọ ndị dị mkpa iji gbanwee onyonyo nke ngwa dabere na QT arụnyere na sistemụ gị.
Nhọrọ ndị chọrọ ka e gbanwee bụ ihe ndị a:
Ikpụrụ GUI: GTK +
Wulite Palette: Anyị na-ahọrọ agba ndị achọrọ maka 3-D mmetụta na Windows Background.
Na ala nke mpio ahụ, ị ​​nwere ike ịhụ foto nlele nke etu ngwa QT ga-esi lelee mgbanwe ndị emere, ozugbo ị nwere afọ ojuju na mgbanwe ndị ahụ, pịa na menu Njikwa ma họrọ nhọrọ nchekwa.
Nke a zuru oke ka ngwa niile awụnyere na sistemụ gị nwere ọdịdị dị mma ma dịkwa mma.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Faịlụ FileLet jiri » Meziwanye ọdịdị nke ngwa GTK + 3 na QT na OpenBox
Achọrọ m itinye ihe. Maka njikọta n’etiti igbe nrịba ama na Qt ga-ezu oke, ị ga-ahụrịrị na arụnyere ọbá akwụkwọ «libgnomeui». Enwere m nsogbu ahụ n'etiti Lubuntu na VLC ma edozi m ya dị ka nke a. Mmeri!
Mana olee isiokwu gnome-themes-ọkọlọtọ nwere?
Calligra, onye ukwu na-ama Libreoffice aka